Khelkudsansar.com | एल क्लासिको भिडन्त शनिबार साँझ,मेसी बलियो कि रोनाल्डो ?
Posted on: December 22, 2017 | views: 589
काठमाडौं– स्पेनका चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाबीच शनिबार साँझ स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। रियलको घरेलु मैदान सान्टिएगो बेर्नाबेउमा शनिबार पौने ६ बजे प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। एल क्लासिको नामले चर्चित दुई क्लबबीचको भिडन्तलाई विश्वकै बहुप्रतीक्षित खेलको रुपमा लिइन्छ। कतिपयले खेललाई मैदानभित्रको प्रतिस्पर्धा नभई म्याड्रिड र क्लाटान संस्कृति तथा विचारधाराको लडाइँको रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ दुवै टिममा रहेका विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीको प्रतिस्पर्धा पनि हो। त्यसैले खेललाई रियलका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन फरवार्ड लिओनल मेसीको भिडन्तको रुपमा लिने गरिन्छ।
मेसी र रोनाल्डोमध्ये कसले बढी एल क्लासिको जितेका छन् ?
मेसीले अहिलेसम्म रियलविरुद्ध ३६ खेल खेलिसकेका छन्। ३६ मध्ये मेसीले १६ खेल जितेका छन् भने ८ खेल बराबरीमा सकिएका छन्। मेसी मैदान उत्रिएका १२ खेलमा बार्सिलोना पराजित भएको छ। रोनाल्डोले भने अहिलेसम्म २८ खेल बार्सिलोनाविरुद्ध खेलेका छन्। जसमध्ये रोनाल्डोले बढी खेलमा हार बेहोरेका छन्। रोनाल्डो मैदान उत्रिएको २८ मध्ये रियलले १३ खेलमा हारेको छ। ८ खेलमा जित हात पारेको रियल ६ खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ।
एल क्लासिकोमा कसले बढी गोल गरेका छन्?
एल क्लासिकोमा बढी सहभागिता जनाएका मेसीले रोनाल्डोभन्दा बढी गोल गरेका छन्। मेसीले ३६ खेलमा २४ गोल गरेका छन्। मेसीले रियलविरुद्ध १ सय २५ प्रहार गरेका छन्। रोनाल्डोले भने २८ खेलमा १७ गोल गरेका छन् भने १ सय १७ प्रहार गरेका छन्।
कसले बढी गोलका लागि पास दिएका छन्?
एल क्लासिकोमा मेसीले १३ पटक गोलका लागि पास दिएका छन्। यस्तै उनले ६५ पटक अवसर सिर्जन गरेका छन्। रोनाल्डोले भने २८ खेलमा १ पटक मात्र बार्सिलोनाविरुद्ध गोल गर्न पास उपलब्ध गराएका छन्। उनले १४ पटक अवसर सिर्जना गरेका छन्।
सिजनमा को बलियो?
साबिक विजेता म्याड्रिड लिगको चौथो स्थानमा छ। म्याड्रिडले १६ खेलबाट ३१ अंक जोडेको छ। उपाधि रक्षा अभियानमा कठिन मोडमा रहेको रियल लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाभन्दा ११ अंकले पछि छ। बार्सिलोनाले १६ खेलबाट ४२ अंक जोडेको छ।
बढी गोल गर्ने खेलाडीमा पनि मेसी अग्रस्थानमा छन्। मेसीले १६ खेलबाट १३ गोल गरेका छन्। तर रोनाल्डोले भने लिगमा अहिलेसम्म ४ गोल मात्र गरेका छन्। सुरुवाती खेलमा प्रतिबन्धमा परेका रोनाल्डोले सिजनमा ११ खेल खेलका छन्।
समग्र एल क्लासिकोमा बार्सिलोना बलियो कि रियल?
बार्सिलोना र रियलबीच अहिलेसम्म २ सय ६९ पटक एल क्लासिको भिडन्त भएको छ। जसमध्ये २ सय ३५ प्रतिस्पर्धात्मक भिडन्त हुन् भने ३४ प्रदर्शनी खेल हुन्। एल क्लासिकोमा बार्सिलोना बढी खेलमा विजयी भएको छ। बार्सिलोनाले १ सय ११ खेलमा जित हात परेको छ। रियलले ९९ खेलमा जित हात पारेको छ। ५९ खेल बराबरीमा सकिएका छन्।
पछिल्ला ५ खेलको नजिता कस्तो छ?
एल क्लासिकोका पछिल्ला ५ भिडन्तमा बार्सिलोना र रियलले समान २–२ खेलमा जित हात परेका छन्। १ खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्ला २ खेलमा भने रियल विजयी भएको छ। रियलले १७ अगस्टमा भएको स्पेनिस सुपर कपको दोस्रो खेलमा बार्सिलोनालाई २–० ले हराएको थियो। त्यसअघि १४ अगस्टको पहिलो लेगमा रियलले ३–१ को जित हात पारेको थियो।
जुलाई ३० मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियन्स कपमा बार्सिलोनाले रियललाई ३–२ ले पराजित गरेको थियो। गत सिजनको ला लिगाअन्तर्गत २४ अप्रिलमा भएको खेलमा पनि बार्सिलोनाले ३–२ ले नै रियललाई हराएको थियो। त्यसअघि ला लिगाअन्तर्गत ३ डिसेम्बर २०१६ मा भएको एल क्लासिको १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो।एजेन्सीको सहयोगमा